Getafe vs. Barcelona - Warbixinta ciyaarta kubada cagta - 28 Sebtembar 2019 - ESPN - Waxay sheegtaa xiriirka
ACCUEIL » SPORTS »Getafe vs. Barcelona - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 28 Sebtember 2019 - ESPN
Getafe vs. Barcelona - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 28 Sebtember 2019 - ESPN
Barcelona ayaa guuleysatay maqnaanshaha Lionel Messi in lagu garaaco Getafe 2-0 Horyaalka Spain Sabtida oo la leh Luis Suarez isagoo dhaliyay baas dheer oo ka yimid goolhayaha Marc-Andre Ter Stegen .
Shirkadda Junior sidoo kale goolal ayuu u dhaliyay Barcelona, ​​oo dhibic ka lumisay hogaamiyaha horyaalka, Real Madrid, kaasoo Sabtida ka ciyaari doona Atletico Madrid.
- Qiimeynta Barcelona: Ter Stegen 1965: Firpo ayaa ku guuleysatay wadada
Barcelona waxay la ciyaartay ragga 10 min daqiiqaddii 82e difaac ahaan Clement Lenglet waxaa la siiyay kaar hurdi labaad ah anshax xumo awgeed.
Luis Suarez ayaa dhaliyay gooldhaliyaha Barcelona sabtidii markii ay garaaceen Getafe. OSCAR DEL POZO / AFP / Sawirro Getty
Ter Stegen ayaa gooldhalinta u furay goolkiisii ​​ugu horreeyay ee Suarez ee 41e ka dib markii uu ka tagay gobolkiisa si uu u joojiyo burburin. Kubadda ayuu ku xukumaa laabta ka hor inta uusan u soo dirin jihada kale si uu ugu ogolaado Suárez inuu wajaho goolhayaha Getafe David Soria . Weeraryahanka reer Uruguay ayaa si deggan u taabtay goolka seddexaad ee xilli ciyaareedkii uu ka dhaliyay Soria.
"Ha khaldin, waan arkay, laakiin si cad uma muuqan," ayuu yidhi Ter Stegen isagoo dhoolacadeynaya. Waxay ahayd daqiiqaddii ugu fiicneyd oo Luis ayaa fursadda qaatay. Waxay ahayd gool qurux badan.
Tababaraha Barcelona Ernesto Valverde ayaa sidoo kale ugu hambalyeeyay goolhayaha reer Jarmalka shaqadiisa cagta.
Wuxuu la yaaban yahay cagihiisa. Tani ma ahan markii ugu horreysay oo uu yool dhaliso, ayuu yidhi Valverde. “Waxbadan ayuu ina siinayaa siyaabo badan. Laakiin caawinaadku waa uun shay-aan-caadi ahayn, waxaan door bidaynaa haddii uu sii wado inuu joojiyo. "
Firpo ayaa dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay ee kooxda Barcelona isagoo ku dhowaaday 49ème ka dib markii uu dejiyay Carles Perez, bedelkii Messi ee weerarka Tani waa guushii ugu horreysay ee ay ka gaarto Barcelona iyo kulankiisii ​​ugu horreeyay. horyaal iyada oo aan wax goolal ah laga dhalin.
Valverde kuma xisaabtami karin Ousmane Dembele cudurada muruqyada dartiis.
Getafe, oo u dhacay kaalinta kow iyo tobnaad, lama garaacin ilaa iyo markaa. guuldaradii ka soo gaartay Atlético Madrid ciyaartii furitaanka.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/report?gameId=550544
West Ham waxay soo jiidatay 2-2 Bournemouth, 3ème ee EPL